सेना, प्रहरी र वाइसिएलले घरबाटै महिला-बृद्धबृद्धालार्इ तानेर ल्याउँदा समेत थवाङमा किन खस्यो न्यून मत ? — Imandarmedia.com
सेना, प्रहरी र वाइसिएलले घरबाटै महिला-बृद्धबृद्धालार्इ तानेर ल्याउँदा समेत थवाङमा किन खस्यो न्यून मत ?
पृतनापति र एआइजीको पनि केहि चलेन
यसपटक पनि थवाङले यसअघिकाे जस्तै अाफ्नाे एेतिहासिक विरासत अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिएकाे छ । राज्यका व्यवहारका विरुद्ध सधै विद्राेही बनेकाे थवाङमा यसपटक न्यून मतदान भएकाे छ । खसेकाे मत पनि ठूलाे सङ्ख्यामा बदर हुने सम्भावना रहेकाे बताइन्छ ।
सेना, प्रहरी र वाइसिएलकाे टाेलीले जवरजस्त घरघरबाट थवाङवासीलार्इ तानेर ल्याउँदै जवरजस्त भाेट हाल्न लगाएका कारण मात्र केही प्रतिशत मतदान भएकाे बताइन्छ । थवाङमा कूल मतदाता सङ्ख्या २७ सय ७२ हाे । थवाङकाे मतदान केन्द्र १ मा १२६७ थिए भने मतदान केन्द्र २ मा १५०५ मतदाता थिए । दुबै मतदान केन्द्रमा गरेर ३० प्रतिशत मत खसेकाे हाे ।
पहिलाे संविधानसभाकाे निर्वाचनमा पूरै मतदान भएकाे थवाङमा दाेस्राे संविधान सभाकाे निर्वाचनमा शुन्य मतदान भएकाे थियाे । यसपटक राेल्पामा नेपाली सेनाका पृतनापति र नेपाल प्रहरीका एअाइजी नै राेल्पाकाे सुरक्षाकाे नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका थिए ।
थवाङ मतदान केन्द्रमै नेपाल प्रहरीका एसपीकाे नेतृत्वमा ठूलाे सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएकाे थियाे । त्यति गर्दा पनि थवाङमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्र मतदान भएकाे छ । स्राेतका अनुसार खसेकाे भाेट पनि अधिकांश बदर हुने सम्भावना रहेकाे छ ।
यसअघि २०७० सालकाे निर्वाचनमा थवाङी जनताले माअाेवादी केन्द्रकी नेतृ अाेनसरी घर्तीलार्इ उल्टाे दमाहा बाजा बजाएर लखेटेका थिए । यसपटक वर्षमानले त्यसकाे इगाे साध्नका लागि पनि यति ठूलाे सङ्ख्यामा सुरक्षाफाैज र सुरक्षा निकायकाे उच्च तहकाे कमाण्ड राेल्पामा राख्न दवाव दिएकाे बुझिएकाे छ ।
यसपटककाे निर्वाचनकाे प्रचारप्रसारका क्रममा सुरुमै राेल्पामा वर्षमानमाथि वम प्रहार भएका कारण पनि राेल्पामा ठूलै घटना हुनसक्ने अनुमान सुरक्षा निकायकाे हुनसक्ने अनुमान गरिएकाे छ । साेही बुझाइका कारण सुरक्षा निकायकाे उच्च कमाण्ड राेल्पामा बसेकाे बताइन्छ । तर पृतनापति र एआइजीको पनि थावाङमा केहि चलेन ।
भिटा मतदान केन्द्र शुन्य बनेपछि सेना-प्रहरी जनताको घर-घरमा पस्यो !
माओवादी केन्द्रको चुनाव प्रचार टोलीलाई रोल्पालीले लखेटे, प्रचार सामाग्री जलाएर आगो तापे !
सिरहामा प्रहरीमाथि गोली प्रहार, दुई जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा मतदान केन्द्रमै गोली चल्यो, मतदाता घरतिर दगुरे
रामहरी खतिवडाको क्षेत्रमा तनाब, कांग्रेसले खुकुरी नचाएपछि, बाम गठबन्धनद्वारा चुनाब बहिष्कार
नुवाकोट: उम्मेदवारसहित मतपेटिका बोकेको गाडीमा शकिशाली बिष्पोट
म्याग्दीमा मतपेटिका बोकेर आउदै गरेको गाडीमा बम प्रहार
Breaking: कालिकोटको मुम्रामा प्रहरी र स्थानीयबीच दोहोरो भिडन्त, गोली लागी २ घाइते
कालिकोटे महिलाहरुको अर्को कृतिमान: गिरफ्तार तीन युवालाई प्रहरीको कब्जाबाट खोसे
BREAKING : रुकुममा जनार्दन शर्मामाथि शहिद परिवार निर्मलाले गरिन चप्पल प्रहार
नुवाकोटमा कांग्रेस नेता रामशरण महत चढेको गाडी एम्बुसमा पर्‍यो, ५ जना जना घाइते